Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na China akọrọ |Shengte
Ihe ngbanwe ọhụrụ anyị, nke ndị otu anyị siri ike chepụta, mara mma ma na-emezi nguzozi n'etiti oge imewe, ịdị irè ọnụ ahịa, ọrụ dị jụụ na arụmọrụ dị elu.Nhọrọ eriri igwe na-agụnye ọla kọpa ma ọ bụ aluminom enamel waya na eriri okirikiri na atụmatụ agbakọtara.Tụkwasị na nke ahụ, anyị na-ahọrọ ihe mkpuchi dị elu, si otú a na-emeziwanye àgwà ngwaahịa na ịgbatị ndụ ọrụ.N'ime ngwa ahịa anyị, anyị nwere ụdị ngbanwe dị iche iche sitere na 125 kilovolt ampere (KVA) ruo 2,500 KVA, anyị nwere ike ịmepụta nkeji omenala ruo 4,000 KVA.
Uru nke ihe ngbanwe ọkụ anyị dị n'ụdị akọrọ sitere na imewe na ihe eji arụ ọrụ.
1. Akụrụngwa dị mma
Ihe ntụgharị ọhụrụ anyị, nke ndị otu anyị siri ike chepụta, bụ ndị mara mma ma na-edozi nguzozi n'etiti oge imewe, ịdị irè ọnụ ahịa, ọrụ dị jụụ na arụmọrụ dị elu. Nhọrọ eriri igwe na-agụnye ọla kọpa ma ọ bụ aluminum enameled waya na mkpuchi okirikiri na mkpuchi mkpuchi.Na mgbakwunye, anyị na-ahọrọ. ihe mkpuchi mkpuchi dị elu, si otú ahụ na-emeziwanye àgwà ngwaahịa na ịgbatị ndụ ọrụ.Na ngwaahịa anyị, anyị nwere ụdị ihe ngbanwe nke akọrọ sitere na 125 kilovolt ampere (KVA) ruo 2,500 KVA, anyị nwere ike ịmepụta nkeji omenala ruo 4,000 KVA.
2. Ogologo Ndụ ije ozi
Mgbe a na-eji ihe dị elu eme ihe na-arụ ọrụ ntụgharị, a pụrụ iji nkeji akọrọ mee ihe ruo ọtụtụ afọ na-enweghị obere mmezi. Nguzogide ha na obere sekit na ikpo ọkụ na-enye ohere ka ngwaọrụ ndị a rụọ ọrụ nke ọma ruo ọtụtụ afọ.
3. Belata ihe ize ndụ ọkụ
Ikpuchi mkpuchi na mkpuchi polyester varnish na-eme ka ha ghara ịdị na mmiri ma gbochie ihe ize ndụ ọkụ. N'ihi ya, ụdị akọrọ na-enye nhọrọ dị mma maka ebe ọkụ ọkụ dị ka ọhịa, osisi petrochemical ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
4. Mfe nwụnye
Anyị ga-anwale onye ntụgharị tupu mbupu, ruo mgbe ihe niile na-egosi na-ezute ụkpụrụ mba, gụnyere mkpọtụ, ugbu a, voltaji na akụkụ ndị ọzọ na-ezute ụkpụrụ mba tupu ịnyefe ndị ahịa. Naanị ndị ahịa kwesịrị ịnata ngwaahịa ahụ, enwere ike iji ike wiring mee ihe.
5. Enweghị mmetọ
Ebe ọ bụ na mmanụ adịghị n'ime ya, ihe ngbanwe dị n'ụdị akọrọ enweghị ihe ọ bụla nwere ike ịwụsa ma metọọ ebe ahụ.Ụdị ndị a na-enye ọrụ na-enweghị mmetọ, na-enye ohere iji ha mee ihe na mpaghara ndị nwere mmetụta mmiri.
Nke gara aga: Best Price SC(B) 10 akọrọ ụdị mgbanwe na teknuzu paramita Supplier-shengte
Osote: Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ dị ala nkesa eriri eriri igwe na-ebunye-shengte
Best Price SC(B)10 akọrọ-ụdị transformer na te...